छालाका यस्ता समस्या जुन थाइराइडले गर्दा हुन्छ – ToplineKhabar
छालाका यस्ता समस्या जुन थाइराइडले गर्दा हुन्छ
January 11, 2017 January 11, 2017 प्रदीप भट्ट0Comment
छालासँग थाइराइड ग्रन्थीबाट बन्ने रसायनको सम्बन्ध नङ र मासु सरह हुन्छ। तर, बढ्दो थाइराइड समस्याले छालालाई निकै पिरोल्न थालेको छ। कतिपय बिरामीमा त छालामा देखिएका लक्षणबाट नै थाइराइडको गडबडी भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
छाला सुख्खा, खस्रो, चमकहीन, नरम मुलायम र बच्चाको जस्तो हुनु, अनुहार फुल्नु।
कपाल धेरै झर्ने, कमजोर हुने, टुक्रिने र नङ कमजोर भइ टुक्रिने।
छालाका रोग देखा पर्नु– दुवी, एलर्जी, कत्लेरोग, कालोपना, तालुपना आदि।
थाइराइड र छालाको सम्बन्ध
थाइराइड ग्रन्थीबाट बन्ने टि थ्री र टि फोर रसायनले छालाका विभिन्न क्रियाकलापको सञ्चालन तथा मापन गर्दछन्। यी रसायनको रिसेप्टर छाला, कपाल र नङमा हुन्छ।
थाइराइडको रसायनले आफ्ना रिसेप्टरसँग मिलेर छालाको सन्तुलन बनाइराख्छ। छालाको बाह्य पत्रको विकास र भित्रि पत्रको निमार्णमा यिनको प्रमुख भूमिका हुन्छ। छाला, कपाल र नङले फेर्ने काँचुलीको गति पनि यिनै रसायनले निर्धारण गर्छन्।
जब थाइराइडको गडबडीले यी सन्तुलन बिग्रिन जान्छन् विभिन्न लक्षण देखार्पछन्। ती लक्षण थाइराइड गडबडीको किसिममा भर पर्छ। रसायन कमी वा बढी हुँदा लक्षणहरु फरक हुन्छन्।
थाइराइडको रसायन कमी हुँदा यसको समस्या प्रायः महिलामा देखिने गर्छ। हाइपो थाइराइड समस्याबाट हुने छालाको परिवर्तन छिट्टै देखिँदैन। छालाको परिवर्तन बिरामीले याद गर्न कहिलेकाहीँ वर्षौं लाग्न सक्छ।
शारीरिक थकान, मोटोपना, आलस्य, जाडो लाग्नु, महिनावारी गडबड हुनु जस्ता समस्याबाट सुरु हुने यो रोगलाई धेरै बिरामीले उमेर अनुसारको लक्षण भनेर चुप लाग्छन्।
छालामा धेरै पत्र बन्ने, नङको तह राम्ररी बन्न नसक्ने, पसिना कम आउने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। छाला सुख्खा, खस्रो, बाक्लो, चमकहिन, चिलाउने र कत्ला बस्ने किसिमको हुन्छ। छालामा आउने यी परिवर्तन प्रायःजसो खुट्टाबाट सुरु हुन्छ। बिस्तारै हातगोडा सुन्निने, अनुहार फुल्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त जिब्रो र भित्रि अङ्ग पनि सुन्निन सक्छ।
यसैगरी, हत्केला र पाइतला फुस्रो, कत्लेदार र बाक्लो हुन्छ। कपाल पनि खस्रो, कमजोर, टुक्रिने, नबढ्ने र खुइलिने गर्छ। शरीरमा नीलडाम देखिन सक्छ। शरीरको बोसोको गडबडीले गर्दा आँखामाथि पहेँलो पोको जम्मा हुन सक्छ। नङ बाक्लो तर कमजोर हुन्छ। कुनै बिरामीमा भने कलेजोको क्यारोटिन भिटामिन ‘ए’ मा परिवर्तन हुन नसकेर शरीर पूरै पहेँलो देखिन सक्छ।
हाइपर थाइराइड हुँदा रसायनहरु अधिक मात्रामा बन्छ र छाला पनि छिटोछिटो फेरिन्छ। यसमा रक्त सञ्चारको गति बढ्ने, पसिना र तेलको ग्रन्थीले धेरै काम गर्ने तथा छाला, कपाल र नङले छिटो काँचुली फर्ने हुन्छ।
हाइपर थाइराइड हुँदा छाला नरम, मुलायम, तातो, ओसिलो र बच्चाकोझैँ हुँदै जान्छ। अनुहार र हत्केला रातो हुने, हत्केलामा धेरै पसिना आउने, हातखुट्टा काँप्ने, जिउँ चिलाउने आदि लक्षण देखिन्छ। कपाल छिटोछिटो बढ्छ र उत्तिकै झर्छ। कपाल बढ्ने र झर्ने क्रमको सन्तुलन नमिल्दा कपाल खुइलिएर जान्छ। नङ कमजोर तर चम्किलो हुन्छ।
खुट्टा सुन्निन सक्छ भने एसिटिएच नामक रसायनको धेरै खपतले अनुहार र हातखुट्टा कालो हुन सक्छ। थोरै बिरामीमा हात खुट्टाको औँला र जोर्नी सुन्निने र नयाँ हड्डी बन्ने प्रक्रिया देखिन्छ, जसलाई थाइराइड एक्रोप्याकी भनिन्छ।
हाइपो र हाइपरसँग सम्बन्धित छालाका रोग
दुबी, एलर्जी, कमिलाले टोकेको जस्ता डाबर, डन्डिफोर, अनुहारमा रौँ पलाउने, कपाल खुइलिने, अनुहार र ओठ वरपर कालो दाग आउने आदि।
छाला, कपाल र नङमा आउने परिवर्तनलाई हामी सामान्य ठान्छौँ र उपचारको बारेमा सोच्दैनौँ। यस्तै सामान्य लाग्ने समस्या थाइराइडका कारण पनि हुन सक्ने भएकाले छालामा परिवर्तन आउँदा चिकित्सकको सल्लाह लिइहाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
(छाला रोग विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठ धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत छिन्) स्वास्थ्य खबरबाट
← पेटमा अडि्कएको बियरको बोतलको बिर्को निकाल्न कण्डमको प्रयोग !
प्राधिकरणमा सीईओ गोविन्द पोखरेल नियुक्त →